Misionera frantsay, Eric Celerier, avy amin’ny rafitra Kristianina iraisam-pirenena, Top Chretien, no nilaza ampahibemaso tamin’ireo olona nasaina nanatrika izany. Isan’ny nanatrika azy io moa ny filoham-pirenena mivady. “Mila miray hina ianareo…Mino ny nofinofin’Andriamanitra ho an’i Madagasikara aho. Ankehitriny, ry Madagasikara, minoa anareo tahaka ny hinoan’Andriamanitra anareo. Manana fahaiza-manao ianareo…Ny fanahin’Andriamanitra hitondra fiadanana,fitiavana,fampihavanana, fahaiza-mitsara, fifaliana.’’ Ampahany tamin’ny fehezanteny tao anatin’ny famelabelarany moa io ary nialohavan’ny teny hoe ho avy ny andro hamiratan’ity firenena ity ka i Madagasikara dia toy ny vatosoa hisy haka ao ambanin’ny tany sy hanajary ho tonga hamirapiratra. Isan’ny mahatonga ny filoham-pirenena ho toy ny matoky tena loatra ankehitriny amin’izay fanapahan-keviny rehetra ankehitriny ve ireo trangana faminaniana niseho nifanesy ireo ? Tsy nohadinoin’ity lehilahy nandalo ity anefa no nilaza tamin’izany fa ny finoana dia mila fieritreretana mialohan’ny handraisana fanapahan-kevitra.